राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीको ट्याग त लगेको छ तर यथेष्ट अधिकार दिइएको छैन् : सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शर्मा – Shirish News
राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीको ट्याग त लगेको छ तर यथेष्ट अधिकार दिइएको छैन् : सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शर्मा
by रणधीर चौधरी
प्रदेश नं. २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माज्यूसंग गरिएको कुराकानीको सारांश
जुन उदेश्य तथा मर्मका साथ नेपालमा संघियता आयो आम जनताको बलिदानीबाट उक्त मर्मानुसार अहिले प्रदेश २ को सरकारले डेलेवरी दिन सकिरहेको छ ?
नेपालमा संघियताको सूत्रधान नै हामी हौँ । अर्थात प्रदेश नं. २ संघियताको मर्म अनुसार काम भयो भएन यसलाई बुझ्न पहिला हामीले के हेक्का राख्नु आवश्यक छ भने, हामीले संघियताको लागि आन्दोलन गर्दैगर्दा संघियता ल्याउनुको प्रमुख कारण यो व्यवस्था आईसके पश्चात अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन को अनुभुती गर्ने आधार तयार हुन्छ भनी परिकल्पना गरेका थियौँ । हाम्रो आफ्नो न्यालय होला भनी सोँचेका थियौ । खैर, अहिले नेपालको संबिधानले प्रदान गरेको हक अधिकार लाई हामी जनतामूखी भई अधिकतम सदुपयोग गर्नतर्फ तत्पर रहँदै आएका छौ । तपाईहरुले ध्यानदिनु भएको होला, अप्पन शासन र अप्पन प्रशासनलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्नको निमित्त हामीले आवश्यक बिभिन्न ऐन कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेका छौँ । हामीले प्रहरी एन, करार सेवा एन पारित गरिसकेका छौ । लोकसेवा गठन प्रक्रिया अगाडी बढीसकेको अवस्था छ । यस्ता एन तथा आयोगहरुको गठनलाई महत्वदिइनुपर्छ । र यसको आधारमा म भन्न सक्छु की संघियताको मर्मअनुसार प्रदेश नं.२ अगाडी बढेको छ भन्नु न्यायोचित हुनेछ । यती सम्म गर्नलाई हामीले कतीको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ त्यो कुरै नगरौ ।
समाजिक बिकाश मन्त्रालयप्रति जनतामा असंतुष्टिका स्वर सुनिन्छ । कोरोना जस्तो महामारीको समयमा समेत समाजिक मन्त्रालयको देखिनुपर्ने तत्परता देखिएन भनी जनगुनाशा सुनिन्छ । यसबारे तपाईको भनाई के छ ?
हेर्नुस आलोचना लोकतन्त्रको शुन्दर पक्ष हो । आलोचक नै भइदिएन भने नेतृत्वमा स्वेक्षाचारिता ले ठाउँ पाउँछ जुनकी देश हितमा मानिदैन । स्थानिय निकाय पछि जनताका नजिक को सरकार भनेको प्रदेश सरकार नै हो । प्रदेश सरकारको आफ्नै किसिमको संबैधानिक अधिकार र जटिलताहरु रहेको छ । संबिधानको मर्यादामा रहेर हामीले जनतामुखी भइ काम गर्ने हो र गरिपनी रहेका छौ । जनताका धेरै इक्षा र आकांक्षाहरु ह्ुन्छन । हामीले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेर काम कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो । अब चर्चा गरौ शिक्षा क्षेत्रको । संबिधान बमोजिम विश्वविद्यायल स्थापनाको कुरा मानिसले उठाइरहेका छन् । त्यसमा संघीय सरकारको तर्फबाट हामीलाई कुनै पनि विश्वविद्यालय हस्तानान्तरण गरिएको छैन् । दोस्रा् कुरा, समाजिनक विकाश मन्त्रालय समाजिक रुपान्तरणका लागि दलित शसक्तिकरण बिधेयक पारित गरेको छ, बालबालिका … ऐन पास हुने प्रक्रिायामा छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राबिधीक विद्ययालयको अबधारणा ल्याएका छौ । त्यसैगरी केही समय पहिला मात्र प्रदेस सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पास गरेको अवस्था छ । हो, प्रदेश २ का जनताले प्रदेश सरकार संग स्याना कामहरुको अपेक्षा गर्नुभएको होला । ती सबै काम पुरा गर्न अहिलेको अवस्थामा हामी सफल हुनसकेको छैन् होला । तर हामीले गरेका कामहरुले निरन्तरता पाउने नै छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको चर्चा गर्नु हुन्छ भने महोत्तरी बाट नै सुरु गरौ । तपाइँ बिगतको जलेश्वर अस्पताल हेर्नु भएको होला । र अहिले तपाइँ जलेश्वर अस्पताल भ्रमण गर्नुस भने आग्रह छ मेरो । अहिले तपाइँले जलेश्वर अस्पतालमा अपार परिवर्तन पाउनु हुनेछ । भौतिकपूर्वाधार देखि लिएर सेवा प्रवाहको अवस्था विगतको भन्दा अधिक राम्रो छ । ‘रेफरल’ अस्पतालको संज्ञा पाएको जलेश्वर अस्पतालमा अब सबल र सफल उपचारको व्यवस्था छ । आम जनतामा आशा र भरोसा जागेको अवस्था छ । अन्य जिलाहरुमा जिला अस्पताल नरहेको अवस्था थियो । धनुषामा पनि अंचल अस्पताल ले धानेको थियो । त्यसैगरी, भारदह, राजबिराज, पर्साको पोखरिया गरी बारा लगायतका जिलाहरुमा अस्पताल निर्माण कार्यको थालनी गरिसकेका छौ । हाम्रो श्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिएर कामहरु ऋगाडी बढाएका छौ ।
युवाहरुको कुरा गर्दा हामी संग भएको बजेटबाट बिभिन्न जिलाहरुमा रंगशाला निर्माणका योजनाहरु अगाडी बढाएका छौ । महिला क्षेत्रको कुरा गर्दा महिला हकहित सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न हामी लागि परेका छौ र महिलाको सर्बाङ्गीन बिकासका निमित्त प्रदेश सरकार र समाजिक बिकाश मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।
कुनै पनि सरकारको दुईवटा प्रमुख पिल्लर हुन्छ । ‘सफ्टवेयर’ र ‘हार्डवेयर’ । पहिलो भनेको ऐन कानून हो जसको बिना केही हुन सकिँदैन, सम्भव नै छैन् । र यसमा प्रदेश २ सरकार नेपालको ७ वटै प्रदेश भन्दा अब्बल स्थानमा रहेको छ । दोस्रो भनेको भौतिकपूर्वाधार हो । यो भनेको श्रोत र साधन संग सम्बन्धीत हुन्छ । यसमा हरेक नागरिक को आ-आफ्नो महत्वकांक्षा हुन्छ । सबैको ब्यक्तिगत चाहना पुरा गर्न सफल पनि भइँदैन । तर क्षमता अनुसारको प्रदर्शन हाम्रो सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रीज्यू, भनिन्छ की प्रदेशमा राज्यमन्त्रीहरुलाई अधिकार बिहीन बनाएर राखिएको छ । कतिको सत्यता छ यसमा ?
तपाइँले गर्नुभएको प्रश्न सत्यको नजिक छ । मन्त्रीको ट्याग त लगेको छ तर यथेष्ट अधिकार दिइएको छैन् । मेरो कुरा गर्नु हुन्छ भने म युवा भएको ले आफ्नो जोश र जागरको सदुपयोग गर्छु । जनता लाई सेवा प्रदान गर्नको निमित्त आफ्नो उर्जा लगानी गर्छु र जनहितका काम गर्दै आइरहेको छु । सहकार्य र समन्वय गरी काम गदै आइरहेको छु । मन्त्रालयको आन्तरिक विषय भएको कारण यसमा धेरै बोल्न उचित ठान्दिन म ।
बिगत केही महिना देखि प्रदेश नं. २ सरकार परिवर्तनको चर्चा ब्याप्त छ । कतिको सत्यता छ यसमा ?
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल बीच एकिकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ । तत्कालिन समाजवादी र रजपाले संयुक्तरुपमा सरकार गठन गर्यो, प्रदेश २ मा । पछिल्लो समय जसपा निर्माण भयो र पार्टीको आन्तरिक कामहरु युद्धस्तरमा जारी छ । संबिधान बमोजिम संसदीय दलको नेता जो बन्नु हुन्छ उहाँ नै मुख्यमन्त्री बन्ने हो । हाम्रो गौरबशाली पार्टीले चाँढै संसदिय दलको नेता चुन्नु हुन्छ, बिधीसम्मत तरिका बाट । अति सरकार परिवर्तन बारे प्रस्टता आउँछ ।
संसदीय दलको नेतामा कसको सम्भावना छ या वर्तमान मूख्यमन्त्री ले निरन्तरता पाउनु हुनेछ?
लोकतन्त्रमा बिधीको शासन महत्वपूणर् हुन्छ । राजनीतिक दल पनि बिधीबाट नै चल्ने हो । त्यही भएर संसदीय दलको नेता बिधीबाट चयनित गरिने छ । प्रक्रियामा जाँदा को संसदीय दलको नेता बन्नु हुन्छ भन्न सकिन्न । वर्तमान मूख्यमन्त्रीजी दलको नेतामा चयनित हुनुभयो भने स्वभाविकरुपमा उहाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा निरन्तरता पाउनु हुने छ ।
संसदीय दलको चुनाव कहिले सम्म हुन्छ ?
अहिले हामी बिधान निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । बिधान बन्न साथ दलको चुनाव हुन्छ भनी विश्वस्त रह्नुस ।
जसपा ले आठ सय एक सदस्यिय केन्द्रिय सदस्य चयन गरेको छ । यो आकार जम्बो भयो भनी बिभिन्न कोणबाट आइनै रहेको छ । यस्तो ठूलो आकार भएता पनि जसपा भित्र पनि असंतुष्टीका स्वर सुनिन्छ नी ?
दुई दलको एकिकरण भई निर्माण भएको पार्टी हो जसपा । यसमा दुबै दलबाट हाम्रा अग्रपंक्तिमा रह्नुभएका नेताज्यूहरुले मूल्याङ्कनको आधारमा सूची तयार गरी यो केन्द्रिय सदस्य चयन गनुभएको छ । हाम्रो दलमा नेता कार्यकर्ताको संख्या अधिक रहेकोले ‘एडजस्टमेन्ट’को हिसाबले पनि संख्या अधिक देखिएको हुनसक्छ । नेपालको कुरा गर्नु हुन्छ भने यो भन्दा पनि ‘जम्बो’ आकार अन्य दलहरुमा छ ।
जसपा भित्र बिभिन्न खेमाहरुको आफ्नै किसीमको सक्रियता छ भन्ने प्रति तपाइँको बुझाई के छ ?
कसले के भन्छ त्यतातिर म जान चाहन्न । जसपा निति नियमको आधारमा चल्ने पार्टी हो । यसमा कुनै खेमा वा गोत्रको स्थान छैन्, हुँदैन पनि । जसपा निर्माणको उदेश्य नै उत्पीडनमा पारिएका आम मधेशी, जनजाती, थारु, मुस्लीम, महिला, दलित लगायत सिमांतकृत जनताको हक अधिकार सुनिश्चित पार्नु हो । हामी त्यसमै केन्द्रित छौ र रहिरह्नै छौ । अतः कसले के भन्छ त्यतातीर हामी सोँचेर आफ्नो उदेश्यबाट कदापी भटकिन चाहँदैनौ ।
जसपा देशको बैकल्पिक शक्ति हो वा हुन्छ जुन तपाइँहरु भन्नु हुन्छ त्यसको आधार के छ ? जसपा लाई त प्रदेश २ केन्द्रित पार्टीको रुपमा बुझ्नेहरुको संख्या अधिक छ नी ?
जसपा लाई तपाइँ यदी ‘क्लस्टरिङ’ को हिसाबले हेर्नुभयो भने यसमा महत्वपूणर् तीनवटा क्लस्टरहरु छन । खसआर्य, आदिवासी जनजाती र मधेशी मुस्लीम लगायतहरुको एक ‘क्लस्टर’ । र यसले देखाउँछ की जसपा सिंगो नेपालको साँझा पार्टी हो । इन्द्रेणी समुहको समूचीत आकार जसपा मा मात्र छ । यसलाई हामीले तुलनात्मक दृष्टिकोणले पनि हेनुपर्छ । नेपाली कांग्रेश र नेपाल कम्यिुनिस्ट पार्टी लाई हेर्दा एकल जात र नश्लको पार्टी लाग्दैन तपाइँलाई ? तर जसपाको नेतृत्वतहमा समेत सबै ‘क्लस्टर’को सम्मानजनक स्थान छ ।
तपाइँ लाई विश्वास छ की आउँदो चुनावमा जसपाले राम्रो प्रदर्शन गरी नेपाली राजनीतिमा सम्मानजनक स्थान ओगट्छ ?
यथास्थिती लाई निरन्तरता दिने पार्टी भन्दा भिन्न ढंगले प्रगतिशिलताको पथमा जसरी हामी अघि बढी रहेका छौ त्यसले निश्च्य नै हामी लाई नेपाली राजनितिमा बैकल्पीक शक्तिको रुपमा नेपाली जनताले स्थापित गराउनु हुनेछ ।
संबिधान संसोधनको मुद्दालाई लिएर जसपा कतिको गम्भिर छ ?
तपाइँलाई स्मरण होला की पछिल्लो चुनावमा हामीले नेपाली जनतासंग मत माग्दा हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ राखेका थियौँ, संबिधान संसोधनको मुद्दा लाई । त्यसै अनुरुप हामीले संबिधान संसोधनको मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएका छौ । संसदीय राजनीतिमा अंकगणीतीय महत्वबारे तपाइँ अवगत नै हुनु हुन्छ । तर प्रमुख कुरा भनेको आफ्नो दृढता र इक्षा शक्ति हो । संघीय सांसदमा जसपाले संबिधान संसोधनको मुद्दालाई जोडदार ढंगले उठाउँदै आएको छ । प्रतिफल पनि हामी हात पार्छौ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ । यसमा प्रतिगमनकारी राजनीतिक दलहरुले जसरी मधेश आन्दोलनको मुद्दा लाई अपमान गरीरहेको छ त्यो निन्दनीय छ । नेपाली जनताले त्यस्ता यथास्थितीवादीहरुलाई जवाफ दिनुहुनेछ त्यसमा पनि हामी ढुक्क छौ । संबिधान संसोधन बारे संघीय संसदमा मतदान हुँदा ६० प्रतिशत सांसदले संसोधनको पक्षमा जसरी मतदान गर्नुभएको थियो त्यसले त यो साबित भईसकेको छ की यो संबिधान अपुरो र संसोधनिय छ ।
हामी प्रदेश र स्थानिय तहबाट जनतालाई विकाश निर्माणका कार्य गरी सेवा समेत दिइरहेका छौ । तर संबिधान संसोधन जो हाम्रो मुल मुद्दा हो त्यसमा हाम्रो दृढता कायम रहेको छ ।
प्रदेश नं.२ बोहक का प्रदेशहरुमा जसपाको सांगठनिक अवस्था कस्तो छ ?
हेर्नुस, जसपा निर्माण हुनुभन्दा पहिला राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीको आफ्नै संगठन थियो मधेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा । अहिले एकिकृत जसपाले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गर्दा पनि आधार भूमी यसको मधेश नै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । जसपाको मुद्दा भनेको पार्टीको मुद्दा होईन, यो सम्पूणर् सिमांतकृतहरुको हो । तपाइँलाई थाहा छ होला, भारतमा गुजरातको मोडेलमा भारतको मोडेल तयार भएको छ । यसको आधारभूमी मधेश रहे पनि हामी मधेशमा जसरी संगठन निर्माण गरेका छौ त्यसरी नै देशका अन्य ठाउँमा पनि संगठन सुदृढीकरण गर्दै जाने हो ।
अन्त्यमा, प्रदेश नंं.२ को नामाकरण किन गर्न सकिरह्नु भएको छैन् ? कहिले सम्म होला ?
हेर्नुहोस, आज जुन प्रदेशहरु हेरी रह्नुभएको छ त्यसको आधारशिला भनेको मधेश आन्दोलन हो र मधेश हो । तत्कालिन राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रदेश नं. २ मा सरकार बनाइराख्दा यस प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नुपर्छ भनी संक्लपीत रहँदै आएको अवस्था छ । त्यसबाट हामी पछाडी हटेका छौनौ र हट्दैनौ पनि । बिभिन्न पार्टी बिभिन्न खाले नामहरु प्रस्ताव गरिरह्नु भएको छ । तर यस प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै रह्ने छ भनी हाम्रो सरकारको प्रतिवद्धता छ, आम संघीयतावदी जनताहरु संग । संबिधान संसोधन जस्तो मधेश प्रदेश नामाकरण गर्नको लागि पनि हाम्रो संघर्ष जारी छ । यथाशिर्घ यसमा हामी सफल पनि हुने नै छौ, ढुक्क भए हुन्छ ।
उखु किसानहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई बुझाएको स्मरण पत्र